Counter-Strike 1.6 Efijery menu ► Counter Strike 1.6 Download
Counter-Strike 1.6 Efijery menu
March 9, 2022	Off	By roma
Raha mitady hilalao ianao Counter-Strike 1.6, ny efijery sakafo no fiatoana voalohany anao. Eto ianao dia afaka manamboatra sy mametraka ny lalaonao mba hiasa araka izay tianao. Ny zava-drehetra manomboka amin'ny fifehezanao ka hatramin'ny hamafin'ny mozika dia azo amboarina eto. Raha mpilalao vaovao ianao ary tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana, ity no toerana tsara hanombohana. Ity ambany ity ny fizarazarana ny zavatra ho hitanao ao amin'ny Counter-Strike 1.6 efijery menio!
Safidy mpilalao tokana sy Multiplayer amin'ny Counter-Strike 1.6 efijery menio
Ny tabilao Single Player eo amin'ny Counter-Strike 1.6 efijery menio mamela ny mpilalao hiditra ny fomba ivelan'ny aterineto ny Counter Strike 1.6. Ny maodely an-tserasera dia manome fahafahana ny mpilalao hianatra ny fomba filalaovana amin'ny alalan'ny filalaovana amin'ny bots izay nomanina hanana fahalemena sy tanjaka manokana mifototra amin'ny haavon'ny fahasarotany. Ny endri-javatra miavaka amin'ny maody ivelan'ny aterineto dia ny ahafahan'ny mpilalao misafidy izay bots tiany holalaovina fa tsy tokony ho voatendry ho azy toy ny amin'ny fomba Multiplayer. Ny safidy faharoa ho hitanao ao amin'ny Counter-Strike 1.6 efijery menio dia Multiplayer - ity no ahafahanao mifandray -tserasera mpizara ary mifaninana amin'ireo mpilalao hafa. Misy mpizara an'arivony azo alaina! Ny mpilalao dia afaka mijery fampahalalana momba ny mpizara tsirairay ao anatin'izany ny anarany, ny isan'ny mpilalao ao aminy, ny karazana sari-tany, ny adiresy IP ary ny tenimiafina alohan'ny hisafidianana iray. Ny tabilao Internet dia ahafahan'ny mpilalao mifandray mivantana amin'ireo mpilalao hafa manerana izao tontolo izao na amin'ny alàlan'ny fifandraisana LAN rehefa misy.
Safidy hafa amin'ny Counter-Strike 1.6 efijery menio
Ao amin'ny Counter Strike 1.6 efijery menio, misy ihany koa ny bokotra Options. Eto no ahafahanao manova ny firafitry ny lalao. Ny menu safidy dia somary vitsy ihany koa; Ny hany safidy dia ny manodina aloka (izay tsy notohanan'ny ankamaroan'ny karatra sary tamin'izany fotoana izany Counter-Strike 1.6 navoaka), amboary ny famirapiratana, ary ovay ny hamafin'ny mozika sy ny vokatry ny feo. Ny safidy roa farany azonao jerena ao amin'ny Counter Strike 1.6 efijery menio dia ny Credits, izay ahafahanao mijery ny crédit amin'ny Counter-Strike 1.6 ary mazava ho azy, ny bokotra Mialà - raha manindry azy ianao dia hivoaka ny lalao. Araka ny hitanao, ny Counter Strike 1.6 efijery menio dia tena tsotra ny mandeha sy mampiasa. Ankehitriny dia azonao atao ny manamboatra ny lalao amin'ny tianao ary mankafy ny milalao azy!
Tagscounter strike counter strike 1.6 counter strike 1.6 Download Counter-Strike 1.6 Efijery menu cs cs 1.6 cs 1.6 Download cs 1.6 efijery menio safidy sakafo safidy sakafo counter-strike safidy sakafo cs 1.6 efijery menio mpilalao tokana
Torohevitra 8 amin'ny filalaovana Counter-Strike 1.6
Counter-Strike 1.6 ny fomba hilalao ity lalao ity